चुनौतीका चाङबीच खतिवडा
संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार डा. युवराज खतिवडा दोस्रोपटक अर्थमा मन्त्री नियुक्त भए । उनी संसद्को सदस्य नबनिसकेकाले उनको कार्यकाल कति समय हुने भन्ने स्पष्ट छैन । तर, उनको दोस्रो कार्यकाल अघिल्लोभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
निजीक्षेत्रलाई साथ लिएर प्रतिकूल अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोहोर्‍याउने जिम्मेवारी खतिवडाको काँधका अहिले छ । संकटको समयमा निजीक्षेत्रले सरकारको साथ खोज्नु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसअर्थमा अर्थशास्त्रीका रूपमा खतिवडाको परीक्षण अब शुरू हुँदै छ ।
सत्तारूढ दल नेकपाभित्र उनको पुनर्नियुक्तिलाई लिएर देखिएको चर्को मतान्तरका बीच खतिवडाले अर्थतन्त्रको कमान सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दह्रो साथ भएकै कारण उनी अर्थ मन्त्रालयमा पुनः छिर्न सकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको बलियो साथ र समर्थनका कारण खतिवडालाई नीतिगत निर्णय गर्न र सुधार गर्न पक्कै सहज हुनेछ । खासगरी, प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामापछि ओलीको सबैभन्दा विश्वासपात्र खतिवडा नै भएको निष्कर्ष निकालिँदै छ । तर, उनका सामु अर्थतन्त्रका समस्याको चाङ नै देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष ४ महीनामात्र बाँकी छ तर सरकारको पूँजीगत खर्च निकै कमजोर छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले कडा निर्देशन दिँदा पनि विकास खर्च बढ्न सकेको छैन । अहिले कोरोना संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र सन् २००८ को मन्दीको तहमा पुगिसकेको विश्लेषण विश्व अर्थशास्त्रीहरूले गरिसकेका छन् । त्यो बेलाको मन्दीले नेपाललाई नछोएको भए पनि अहिलेको संकटले भने नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रहार गरिसकेको छ । खासगरी नेपालको ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको ठेक्का लिएको चीनबाट कामदार र यन्त्रउपकरण नआउँदा ती आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । चिनियाँ ठेकेदारहरूले फोर्स मेजरको सूचना दिइसकेका छन् । यिनको निर्माण अवधि लम्बिँदा बहुआयामिक प्रभाव पर्ने निश्चित नै छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोरोनाको प्रहारले नराम्ररी थलिइसकेको छ । होटलहरूले कामदार कटौती गर्न थालिसकेका छन् । भ्रमण वर्षका कारण लगानी थपेका होटलहरूले बैंकको ऋण र ब्याजको किस्ता समयमा बुझाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ, जसले गर्दा बैंकहरू पनि समस्यामा पर्ने देखिन्छ । बजारमा औषधि, खाद्यान्न, कपडा आदिको आपूर्ति शृंखला प्रभावित भइसकेको छ । चीनबाट सामान आयात ठप्प छ । बजारमा केही सामानको अभाव देखिन थालेको छ भने मूल्य वृद्धि पनि भएको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि प्रभावित भएको छ । अर्कोतिर, निर्माण कार्यले गति नलिँदा सिमेन्ट, डन्डीजस्ता उद्योगहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । आफ्नो उत्पादन क्षमताको ४०–४५ प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्दा पनि बजारमा सामान विक्री हुन सकेको छैन । मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुका साथै उधारो कारोबारले गर्दा उद्योगीहरू समस्यामा परिसकेका छन् । यसरी अर्थतन्त्रमा चारैतिर दबाब परेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीका सामु निकै चुनौतीहरू देखिएका छन् । अर्थमन्त्रीको पुनरागमनलाई शेयरबजारले रुचाएन, पहिलो दिन नै बजार निकै खस्कियो । डा. खतिवडा र निजीक्षेत्रबीच पनि विश्वासको संकट देखिन्छ । निजीक्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्न कन्जुस्याइँ गरेकाले उनलाई अनुदारवादी मान्ने जमात पनि ठूलै छ । आर्थिक परिसूचकहरूमा संकुचन देखिएको सन्दर्भमा सरकारले लिएको ८ दशमलव ५ आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने आधार अब देखिँदैन । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बजेट र राजस्वको लक्ष्य घटाए पनि वृद्धिदरचाहिँ प्राप्त हुने अर्थमन्त्रीको दाबी थियो । त्यो दाबी पूरा हुने सम्भावना किनै घटेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रलाई गति दिन स्टिमुलस (प्रोत्साहन) प्याकेज अनिवार्य भइसकेको छ ।
विवाद छाडेर अर्थतन्त्रमा ध्यान देऊ[२०७७ सावन, २३]
बन्दाबन्दी होइन, अन्य उपायतिर लाग[२०७७ सावन, २२]
लगानी बोर्डका नयाँ प्रमुखका चुनौती[२०७७ सावन, २१]
पूर्वाधारमा ढिलाइको बोझ[२०७७ सावन, २०]
स्टार्टअप कर्जाको कार्यान्वयन[२०७७ सावन, १९]
[Mar 5, 2020 01:37am]
प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामापछि ओलीको सबैभन्दा विश्वासपात्र खतिवडा नै भएको निष्कर्ष निकालिँदै छ ।